Kabtan Daadir Amiin oo ku dhawaaqay in uu ka tegay kooxda Banaadir Sports | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kabtan Daadir Amiin oo ku dhawaaqay in uu ka tegay kooxda Banaadir Sports
Published on November 17, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(17-11-2018) Kabtankii kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club Daadir Aamiin Cali(Daada) ayaa si rasmi ah iskaga tagay naadiga Banaadir Sports Club.
Xidigan ayaa daqiiqado ka hor shaaciyay inuu iskaga dhaqaaqay kooxda Banaadir isago gacanta ku heesta warqadiisa fasaxa, waxaana jira kooxo badan oo aad u baadi goobay xidiga lagu tilmaamo Ronaldo Soomaaliya ee Daadir Aamiin Cali.
Daadir Aamiin Daada ayaa waqti fiican ku soo qaatay kooxda isago uu ku sugna mudo sideed sano kooxdan Banaadir Sports Club.
Laaciban ayaa 2013-kii loo magacaabay kabtanka rasmiga kooxda Banaadir Sports Club xiligaas wuxuu calaamada xushmada ee kabtanimo kala wareegay daafaca birta ah ahna hada macalinka labaad kooxdan ee Mustaf France.
Ciyaaryahan Daadir Aamiin ayaa naadiga Banaadir S,C kula soo guuleystay intii uu ku sugna kooxdan koobab badan oo kala ah, 2-Horyaalka oo la xasuusto iney ku qaadeyn iyago aan marna laga adkaan, 1-koob oo super Cup, 2-Koobka General Daa’uud iyo 9-koob oo munaasabado.
Xiriiro aan la sameyn kooxda Banaadir ayaa inuu xaqiijiyay in xidigan uu ka tagay kooxda.
Daadir Aamiin ayaa dareenkiisa ka hadlay kadib bixitaankiisa wuxuuna yiri’
Maanta waxey ii tahay maalin xun maadama aan katagay kooxda aan waayaha fiican ku soo qaatay ee Banaadir, balse wax walba oo bilaaw leh waxey leeyihiin dhamaad, maantana waxaa soo gabagaboobay waayihii quruxda badna ee Banaadir Sports Club.
‘” Waxaan halkan ugu mahadcelina dhamaan taageerayasha oo mar walba garab taagan kooxda, maamulka wanaagsan kooxda, iyo ciyaartooyda isku niyada furan.